Žalský hřbet Izintaba ezinkulu, iJizera Mountains, iPharadesi iPharadesi
1.6.2018 by PetrPikora.com
I-Žalský hřbet (i-German Heidelbergkamm) yisifunda se-geomorphological of the Giant Mountains. Itholakala engxenyeni esemaphakathi yendawo phakathi kweHradec Králové neRiberecký Regions.
I-Žalský hřbet ingeyinkimbinkimbi yezintaba ze-Giant Mountains kanye nendawo engaphansi zintabaubuhlungu. Kusukela baseMontenegro ezinkangala ku lwasempumalanga kwesigodi Elbe ehlukanisa ke kusukela ezinkangala eningizimu Lánovská esihlalweni emaphazili, kusukela Studenecké amagquma kanye Wolf emuva esigodini entshonalanga Jizerky futhi kusukela e-Český hřbet ngasenyakatho isihlalo esivela eMechovince naseMedvědín endaweni yaseHercí Míseček.
I-ridge yesifazane yenziwa uchungechunge lwezintaba eziyisithupha ezakha i-compact ridge oriented oriented in the direction north-south. I-northernmost Mechovine (1074 m) yiyona ephezulu kakhulu. Ngaseningizimu balandela Black Rock (1038 m), noSerine (1026 m), Hill Jansky (924 m) kanye ezingemuva futhi front Zaly (m 1035 1018 m). Ezinhlangothini ugema kukhona projection eziningana, kuphela entshonalanga okwedlulele we Rocks Black is uhlangothi olulodwa isiqongo - Big Crane Operator (892 m). Phakathi ezinkulu zihlanganisa ezimangalisayo ngaphezulu Genoa entabeni flank esentshonalanga noSerine futhi Žalský Imbuzi yokhalo enyakatho emthambekeni engemuva Zaly.
Umfula we-Žalský udala ukuhlukana phakathi kwamabhasi ase-Elbe naseJizzera. I-Elbe igeleza ngokuqondile ngezansi komthamo wayo osempumalanga futhi kukhona iLabská yamanzi amanzi. Ngaphansi komthambeka osentshonalanga ugeleza iJizzerka, okuyinto ehlangothini lesokunxele laseJizzera. Esigodini saseDumlich emthambekeni osempumalanga we-Žalý, kunesakhiwo esikhulu samanzi kusukela ngonyaka we-1889 oklanyelwe ukunikeza i-Vrchlabí ngamanzi okuphuza.
Ihlathi eliqhamukayo elihle lezomnotho lase-spruce lezomnotho liphazamiseka ezindaweni eziningana ngokuhlanzwa. Emagqumeni alo mgwaqo kukhona inqwaba yezinkuni ezinamakhola.
Indawo ye-Žalský hřbet itholakala ensimini zintabaipaki kazwelonke, ingxenye encane yayo endaweni yayo yokuvikela. Baningi idwala outcrops (isib. Harrachov edwaleni emthambekeni enyakatho Mechovinec futhi Emina edwaleni emthambekeni mpumalanga egqumeni Jansky). Rocks eziqongweni noSerine futhi Black Rocks yaguqulwa ngenhloso indawo.
Ngaphandle kwezigqoko ezinhlangothini ezisenyakatho naseningizimu ye-ridge, ukukhulumisana komphakathi kuya ekujuleni kolwandle kuphela eBenecka. Okuwukuphela kokuxhumana okungeyona emphakathini okungewona oxhumana nabo bese kuxhuma uBenecko ngapha kwesithandwa sikaRoyvin no-Špindlerův Mlýn. Eminye imigwaqo ekhonjiwe ihlanganisela imifudlana yemifula eminye imiphakathi eyayizungezile futhi isebenze iqhaza lehlathi.
I ahlangene yokhalo kuyinto izivakashi Cottages kuphela ngqo sehhashi Eseduze yosizi futhi itshe observation umbhoshongo kusukela ngonyaka 1892 khona. Amathafa aseMenecko naseLabská omasipala athintekile. Intaba izindlu nezinye izakhiwo owawusempumalanga imizi eminingi edlelweni (Johane Hora Front Elbe, njll). Emithambekeni kwakhiwe izindawo eziningi ze-ski ezikhonjwe ngamathafa amane:
I-Cableway Benecko - Kejnos
Herlkovkovice - Žalý emgwaqeni
I-Herlkovkov - iBrakov i-cableway
I-Spindleruv Mlyn - i-Labska cableway
I-axis ye-ridge ilandela isibonakaliso esibomvu sezovakashi kusuka Horní Míseček kuya eJilemnice. Isikhwama sikaRovinka sinqamula uphawu oluhlaza oluvela eBenecka ukuya e-Špindlerův Mlýn emithambekeni. Ezinye imizila ebhalwe phansi inesiqondiso esinqamulayo.
Okuthunyelwe kwangaphambilini PEC pod Sněžkou
esihlokweni esilandelayo I-Krkonoše National Park KRNAP